Superegg Kuisirwa Zvimwari - Dhizaini magazini
China 12 Nyamavhuvhu 2021
Kuisirwa Zvimwari Superegg inomiririra nekuwedzera nekukurumidza kwekushandisa kamwechete kofi makapu, ayo anomiririra kuve nyore kwevanhu uye kukanganisa kwayo kwezvakatipoteredza. Ichioneka yakakwiridzirwa pamusoro pevhu, iyo yakagadziriswa geometric superegg chimiro, sezvakanyorwa namuzvinafundo wemasvomhu, Gabriel Lame, inozadzwa nechero imwe nzira dzakaraswa kofi makapu akarongedzwa mumitsara yakakwana. Iyo visceral chiitiko inocherekedza muvhengi kubva kune ese angs uye kure. Anodarika zviuru zvitatu macapura akaunganidzwa kuburikidza nekufona kuita chiitiko pasocial media nenharaunda yenharaunda. Superegg inobvumira iwo anotarisa kuti afungidzire marara uye kukurudzira maitiro matsva ekudzokorora.
Zita rechirongwa : Superegg, Vagadziri zita : Jaco Roeloffs, Izita remutengi : Jaco Roeloffs.
Feiliyundi Nzvimbo Yekutengesa Chishanu 17 Gunyana
Qwerty Elemental Zvikwama Ruoko China 16 Gunyana
Wood Storm Desktop Yekuisa Imo Chitatu 15 Gunyana
Dhizaina bvunzurudzo yezuva Chishanu 17 Gunyana
Dhizaina ngano yezuva China 16 Gunyana
Dhizaini yezuva Chitatu 15 Gunyana
Mugadziri wezuva Chipiri 14 Gunyana
Dhizaini timu yezuva Muvhuro 13 Gunyana
Kuisirwa Zvimwari Jaco Roeloffs Superegg